Abaphathi bohambo banethemba lokubuyisela uhambo ngo-2022
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Abaphathi bohambo banethemba lokubuyisela uhambo ngo-2022
Kuhle ukubona ithemba elinjalo elivela kumzi mveliso wokuhamba wehlabathi njengoko lijongeka libuyela kwimpembelelo ye-Covid-19.
Abane kwishumi labachwephesha abaphezulu abahambahambayo bacinga ukuba i-2022 yokubhukisha ivolumu kulo lonke ishishini iya kuhambelana okanye idlule amanqanaba e-2019, ityhila uphando olukhutshwe namhlanje (ngoMvulo we-1 kaNovemba) yi-WTM yaseLondon.
Bamalunga nama-700 iingcali eziphezulu ezivela kwihlabathi jikelele abanegalelo kwiNgxelo yoShishino lwe-WTM kwaye baveze imbonakalo entle ka-2022, ngokubhekiselele kungekuphela nje kushishino olubanzi kodwa nakwishishini labo.
Xa bebuzwa, iipesenti ezingama-26 ziqinisekile ukuba ukubhukisha ishishini ngo-2022 kuya kuthelekiswa nowama-2019, nge-14% ilindele ukuba u-2022 aqhubele phambili kulo nyaka uphelileyo wesiqhelo ngaphambi kokuqhambuka kwe-COVID-19 ekuqaleni kuka-2020.
Xa bebuzwa malunga nokusebenza kweshishini labo, iingcali zazinethemba elilinganayo, kunye ne-28% elindele ukubhukisha ukuhambelana no-2019, kunye ne-16% ilindele ukonyuka.
Nangona kunjalo, akuyena wonke umntu olindele ukubuyiswa kwe-2022. Phantse isiqingatha sesampuli (48%) sicinga ukuba imboni iya kuwa phantsi kwe-2019, kunye ne-11% engaqinisekanga. Kwaye kumashishini athile, u-2022 uya kuba ngumzabalazo, kunye ne-42% evuma ukuba ukubhukisha akunakwenzeka ukuba kuhambelane no-2019. Enye i-14% ayiqinisekanga ukuba i-2022 iya kuphuma njani.
USimon Press, uMlawuli weMiboniso, iWTM yaseLondon, uthe: “Kumnandi ukubona ithemba elinje kumzi mveliso wokuhamba wehlabathi njengoko ujonge ukuchacha kwimpembelelo ye-Covid-19. Ishishini lidibana kule veki e-WTM eLondon ukuze kuvunyelwane ngezivumelwano zoshishino eziza kubumba ikamva leshishini lokuhamba kunye nokhenketho lwehlabathi.